Uhlangabezana njani nemiphumo yolwalamano olunetyhefu | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 09/06/2021 22:01 | Psicología
Ngelishwa, ubudlelwane obunetyhefu busemini kwaye kunqabile ukuba umntu ongazange akhe ahlupheke ngamanye amaxesha ebomini. Olu hlobo lobudlelwane lunokwenzeka kusapho, lomntu okanye kwindawo yokusebenza. Kwimeko yesi sibini, ukuba nobudlelwane obunetyhefu kubangela ukuba iqhina lenziwe ukuba libe buthathaka kwaye imeko isenokungalawuleki.
Iziphumo kunye neziphumo zokuba lolu hlobo lobudlelwane zinzima kakhulu, ngakumbi ngokubhekisele kwingqondo okanye ngokweemvakalelo. Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha ngeziphumo zobudlelwane obunobungozi kunye nendlela yokuzoyisa.
1 Zithini iziphumo zobudlelwane obunetyhefu
2 Yintoni omele uyenze emva kokuphelisa ubudlelwane obunetyhefu
Zithini iziphumo zobudlelwane obunetyhefu
Ukuba nobudlelwane obunetyhefu nomnye umntu kubi kwesi sibini kwaye iziphumo zinokuqhubeka ngokuhamba kwexesha nangona ubudlelwane buqhawukile. Imeko yengqondo kunye neemvakalelo zabantu abaninzi yonakele ngendlela enzima kakhulu.
Kwiimeko ezininzi umntu oye wabandezeleka kwaye wabandezeleka ngobuhlobo obunobungozi uneziphumo ezibi ezinje ngoxinzelelo, uxinzelelo, okanye ukuzithemba okuzonakalisiweyo. Olu hlobo lwee-sequelae luchaphazela ngokuthe ngqo imeko yengqondo yomntu. Ukuba ezi sequelae azinyangwa njengoko kufanelekile, umntu obaphetheyo unokuhlakulela ityhefu ephela eyonakalisa ubudlelwane bexesha elizayo nabanye abantu.
Into yokuqala ekufuneka ayenze umntu kukwamkela ngokuqinisekileyo ukuba bakubudlelwane obunetyhefu kwaye emva koko kubalulekile ukushiya ubudlelwane obunje ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, elona nyathelo libalulekileyo kukujongana ngendlela elungileyo neemvakalelo ezahlukeneyo zetyhefu kunye neemvakalelo.
Yintoni omele uyenze emva kokuphelisa ubudlelwane obunetyhefu
Kwimeko yokushiya ubudlelwane obunetyhefu, kulungile ukulandela uthotho lweengcebiso ezikunceda ukuba ube ngcono kuwe:
Yama kwisangqa sabahlobo bakho abasondeleyo kunye nosapho.
Kubalulekile ukuziqhelanisa nokucamngca okanye ukuphumla ukukunceda uhambe kuzo zonke ezo ngcinga zingalunganga.
Kuyacetyiswa ukuba uthathe ixesha wedwa ngaphambi kokuzibandakanya kolunye ubudlelwane.
Ukuba uqaphela ukuba imeko yakho yeemvakalelo ayilunganga, kubalulekile ukuba uzibeke ezandleni zengcali.
Kuya kufuneka ubeke ecaleni ukuziva unetyala kwaye jonga phambili.
Kulungile ukuzama ukufumana abahlobo abatsha. ukukunceda ulibale ubomi obudlulileyo.
Okokugqibela, ukurhola ubudlelwane obunetyhefu kwi-bud ayisiyonto ilula kuye nabani na. Nangona kunjalo kubalulekile ukwenza njalo, kuba njengoko ubukwazi ukubona iziphumo kunye neziphumo zetyhefu enjalo zinobuzaza. Ngamaxesha amaninzi, umntu ochaphazelekayo uvelisa kuye umntu ukuziva enetyala ngenxa yeziganeko ezenzeke kulwalamano. Ukuzibeka ityala ngayo yonke into kufuneka kuthintelwe ngalo lonke ixesha ukusukela ngokwayo, le mvakalelo yenye yeendlela zetyhefu ekufuneka isuswe. Ukunyanga i-sequelae enokwenzeka kubalulekile xa umntu ochaphazelekayo enokubakha ubomi bakhe kwaye onwabele uhlobo olusempilweni lobudlelwane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Ukujamelana nemva kobudlelwane obunetyhefu